Bioethanol स्टोभ, 2022 मा कुन छनौट गर्ने? के तिनीहरू पर्याप्त तातो छन्?
वातावरणीय प्रदूषणको समस्याले हामीलाई हाम्रो तापमा कम हानिकारक इन्धनहरू खोज्नुपर्छ। वर्षौंदेखि bioethanol एक प्रसिद्ध इन्धन भएको छ घरहरूमा। त्यसकारण, बजारमा तिनीहरूका धेरै मोडेलहरू दिएर, कुन उत्तम बायोएथानोल स्टोभहरू छनौट गर्न गाह्रो छ।
तपाईंलाई मद्दत गर्न बायोइथानोल स्टोभ छनौट गर्नुहोस्, हाम्रो वेबसाइट को यस खण्ड मा स्टोभ किन्नुहोस् हामी तपाइँलाई तपाइँको घर मा एक स्थापना गर्दा तपाइँ के हेर्नु पर्छ भनेर बताउनेछौं।
उत्तम बायोएथानोल स्टोभको तुलना
तल तपाईंसँग टेबल छ Bioethanol स्टोभ को केहि उत्कृष्ट मोडेल संग तुलना जुन तपाईं अहिले किन्न सक्नुहुन्छ।
बायोइथानोल चुलो... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
बायोइथानोल चुलो संग... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
Oneconcept Phantasm... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
PURLINE काठ स्टोभ ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
बायोइथानोल चिमनी... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो	बायोइथानोल चुलो...
मूल्य गुणस्तर	बायोइथानोल चुलो संग...
हाम्रो मनपर्ने	बायोइथानोल चुलो संग...
PURLINE काठ स्टोभ ...
सबै भन्दा राम्रो bioethanol स्टोभ
अब हामी बायोएथानोल चुलोका केही उदाहरणहरू नाम दिनेछौँ।
ब्रायन र ड्यानी
यदि तपाईंसँग ठूलो ठाउँ छैन भने, यो कम्प्याक्ट फायरप्लेसलाई सजावटी तत्वको रूपमा टेबलमा राख्न सकिन्छ। यसमा एकदम परिष्कृत डिजाइन छ तर धेरै गहनाहरू बिना। यसमा स्टेनलेस सामग्रीबाट बनेको बर्नर छ जसले यसलाई ठूलो प्रतिरोध दिन्छ। बायोइथानोलसँग काम गर्दा यसले कुनै पनि प्रकारको धुवाँ उत्पादन गर्दैन। यसले खरानी पनि उत्पादन गर्दैन र यसको सफाई एकदम सरल छ।
ब्रायन र ड्यानी बायो-फायरप्लेस...
यसको मापन संकुचित छन्, तिनीहरूलाई टेबलमा राख्नको लागि उत्तम। हीटरको रूपमा सेवा गर्नुको साथै, तपाईं कोठाको सजावटमा योगदान गर्न सक्नुहुन्छ।
यसको बेफाइदा यो हो कि, यद्यपि यसमा सुरक्षात्मक गिलास छ, पक्षहरू खुला रहन्छन्। यसको मतलब यसको प्रयोगको समयमा प्रयोगको सावधानीहरू चरम हुनुपर्छ।
राफेल प्रीमियम किनमेल
यस प्रकारको चुलोमा परम्परागत मोडल छ तर इन्धनको रूपमा बायोइथानोलको प्रयोग भएको छ। यस डिजाइनमा सेतो रंग र ३.५ किलोवाटको पावर छ। यसले यसलाई शक्तिशाली हीटर बनाउँछ। यसको सुरुचिपूर्ण मोडेलले यसलाई बैठक कोठा र भोजन कक्षहरू सजाउनको लागि उपयुक्त बनाउँछ। फायरप्लेसको भित्री भाग एकदम राम्रो उचाइ छ जहाँ ढुङ्गा र जाली संग कालो बर्नर स्थित छ। यो परम्परागत फायरप्लेसहरूको सम्झना दिलाउने हो, तर दाउरा र धुवाँ उत्सर्जनको प्रयोग बिना।
चिम्नी इथानोल र जेल...
यो मोडेल ती मानिसहरूका लागि आदर्श हो जो परम्परागत फायरप्लेसहरू त्याग्न चाहँदैनन् तर दाउरा, खरानीको धुवाँ त्याग्न चाहन्छन्। यद्यपि, यसमा केही बेफाइदाहरू छन्। यसको विशेषताहरु को कारण, यसको विधानसभा अन्य मोडेल संग भन्दा बढी जटिल छ। प्रयोगको क्रममा सम्भावित दुर्घटनाहरूबाट बच्न, तिनीहरूलाई पर्खालमा राख्न आवश्यक छ।
बायो चिमनी प्लस सेतो
यो फायरप्लेस क्लासिक मन पराउनेहरूको लागि उठ्छ। यो फायरप्लेस परम्परागत काठ जलाउनेहरू जस्तै छ, तर यसले धुवाँ वा खरानी उत्पादन गर्दैन भन्ने फाइदाको साथ। यो आवश्यक छ कि तिनीहरू पर्खालमा राखिएको छ, तर धुवाँ आउटलेट च्यानल राख्नु बिना। यो गुणस्तर र मूल्य को मामला मा सबै भन्दा राम्रो फायरप्लेस मानिन्छ।
Don Fuego XXL फायरप्लेस ...
यसको सामग्री उच्च गुणस्तरको छ। यो पाउडर कोटिंग संग स्टेनलेस स्टील बनेको छ। दहन कक्ष अधिक प्रतिरोध प्रदान गर्न कालो वार्निश फलामबाट बनेको छ। यसको मापन 40 x 110 x 15 सेन्टिमिटर हो, जुन हामीले घरमा रहेको ठाउँको समीक्षा गर्नलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
थप्न सकिने काउन्टर यसको खपत हो। यसको छ वटा बर्नर र बायोएथानोलको तीन लिटरको ठूलो क्षमताको कारण, यसको खपत केही हदसम्म बढी हुन सक्छ, विशेष गरी यदि हामीले सबै बर्नरहरू एकै समयमा प्रयोग गर्छौं भने।
घर सेतो चयन
*सूचना: बन्द मोडेल
यो मोडेल धेरै पूर्ण छ। यो एक बैठक कोठा वा भोजन कोठा लागि डिजाइन गरिएको छ। फायरप्लेसमा 90x40x12cm को उपायहरू MDF र मेलानिन फिनिशबाट बनेको मोड्युलहरूको प्रणालीमा एकीकृत हुन्छन्। यसको म्याट सेतो रंग र अगाडिको भागमा भएको चमकले यसलाई राम्रोसँग सफा गर्न र वातावरणलाई राम्रोसँग उज्यालो बनाउन अनुमति दिन्छ। यो मोडेलले यसलाई सजावट परिवर्तन नगरी घरमा एकीकृत गर्न अनुमति दिन्छ।
चयन गृह - फर्निचर ...
यस फायरप्लेसको बेफाइदा यो हो कि यदि तपाईलाई मात्र तातो फायरप्लेस चाहिन्छ भने, यसले ल्याएको फर्निचर उपयोगी नहुन सक्छ।
बायोएथानोल स्टोभ कसरी छनौट गर्ने
जब तपाई बायोएथानोल स्टोभ किन्न चाहानुहुन्छ तपाईले उत्पादनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने धेरै प्यारामिटरहरू हेर्नु पर्छ। पहिलो उपभोग हो। खरिदको सामान्य उद्देश्य भनेको किफायती तरिकाले तताउने तर गुणस्तर नगुमाईकन हो। स्टोभ वा फायरप्लेसको लागतलाई ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। बायोइथानोलको खपत चुलोको साइज, बर्नरको संख्या र ज्वालाको उद्घाटनमा निर्भर गर्दछ।
हामीले ध्यानमा राख्नु पर्ने अर्को प्यारामिटर भनेको शक्ति हो। फायरप्लेसमा जति धेरै शक्ति हुन्छ, उपकरणको खपत त्यति नै बढी हुन्छ। सबैभन्दा उपयुक्त कुरा भनेको शक्ति र उपभोगको बीचमा राम्रो सन्तुलन हुनु हो।
अन्तमा, जानकारीको महत्त्वपूर्ण टुक्रा साइज हो। प्रश्नमा उत्पादन जति ठूलो छ, तपाईले उपभोग गर्नुहुनेछ। यसले हामीलाई शक्ति र उपभोग बीचको सम्बन्धबाट टाढा जान्छ। तसर्थ, हामीले तताउन चाहेको कोठाको आकारमा फिट हुने स्टोभ छान्नुपर्छ।
के बायोइथानोल स्टोभ तातो हुन्छ?
बायोएथानोल फायरप्लेसहरू संवहन गर्मी को एक प्रकार प्रदान। यो हामी बसेको कोठा तताउन मात्र सक्षम छैन, तर यसलाई अन्य कोठाहरूमा पनि समायोजन गर्न सकिन्छ। यो सामान्यतया मुख्य हीटरको रूपमा प्रयोग गरिँदैन।
तिनीहरू कोठाहरूमा राख्नको लागि डिजाइन गरिएको हो जहाँ हामी धेरै समय बिताउँछौं। तिनीहरूको शक्ति र आकारमा निर्भर गर्दछ तिनीहरूले अधिक वा कम गर्मी हुनेछ। बायो-फायरप्लेसहरूमा सामान्य शक्ति २ किलोवाट हुन्छ। यो शक्ति संग हामी लगभग 20 वर्ग मिटर को कोठा तताउन सक्छौं। यसरी, हाम्रो कोठाको आकारमा निर्भर गर्दै, हामी थाहा पाउन सक्छौं कि कुन शक्ति किन्ने।
यी यन्त्रहरूको प्रयोगको फाइदा र बेफाइदाहरू छन्।
यी यसका फाइदाहरू हुन्:
तिनीहरू पर्यावरण अनुकूल र स्थापना गर्न सजिलो छन्।
तिनीहरूलाई एक्स्ट्रक्टर वा भेन्टिलेसन ट्यूबहरू आवश्यक पर्दैन।
तिनीहरूको ताप स्तर चाँडै पुग्छ।
तिनीहरूले घरमा अतिरिक्त डिजाइन ल्याउँछन्।
तिनीहरू सुरक्षित र असक्षम गर्न सजिलो छन्।
मूल्य एकदम सस्तो छ।
तिनीहरूसँग थोरै मर्मतसम्भार छ।
यसको कमजोरीहरू मध्ये हामी फेला पार्छौं:
बायोइथानोल अलि महँगो छ।
यद्यपि यसले धुवाँ वा खरानी छोड्दैन, यसले उल्लेखनीय गन्ध दिन्छ।
ताप गर्ने क्षमता अधिक सीमित छ। उच्च CO2 सांद्रताबाट बच्नको लागि पर्याप्त अक्सिजन स्तर उपस्थित हुनुपर्छ।
तपाईले फर्निचरमा राख्नु पर्ने न्यूनतम दूरी एक मिटर हो।
के बायोएथानोल स्टोभ सुरक्षित छ?
आगो र तताउने विषय संग, प्रश्न सधैं तिनीहरू सुरक्षित छन् कि भनेर उठ्छ। Bioethanol स्टोभ एकदम सुरक्षित छन्, किनकि यसको निष्क्रियता धेरै सरल छ। थप रूपमा, धेरै मोडेलहरूमा केही ज्वाला संरक्षकहरू छन् जसले आकस्मिक जलन रोक्न मद्दत गर्दछ।
यसको खतराको स्तर परम्परागत भन्दा धेरै कम छ काठ स्टोभ, किनकि त्यहाँ न त स्पार्कहरू छन् न जल्ने लगहरू छन्। हाम्रो बायोइथानोल स्टोभ पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनको लागि, हामीले एक मिटरको सुरक्षा दूरीलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
बायोएथानोल कहाँ किन्न
बायोइथानोल यसलाई उपभोग गर्दा भर्ना गर्नुपर्छ। बायोएथानोलका विभिन्न प्रकार र ब्रान्डहरू छन्। यसमा जति उच्च गुणस्तर छ, कम गन्ध छोड्नुको साथै यसमा अधिक तताउने क्षमता हुनेछ।
Bioethanol 5L को लागि...
बायोइथानोलको यो ५-लिटर बोतलले थोरै गन्ध उत्पन्न गर्छ र ठूलो तताउने क्षमता छ।
तपाईले यसलाई एक लिटर भोल्युममा पनि किन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई यसलाई ढुवानी गर्न आवश्यक छ भने।
एक लिटर बायोइथानोल कति समय टिक्छ?
बायोएथानोलको खपत पूर्ण रूपमा फायरप्लेसको शक्ति र प्रकाश समय मा निर्भर गर्दछ। प्रत्येक चिम्नीमा निश्चित ट्याङ्की क्षमता हुन्छ। यसले के समात्न सक्छ भन्ने आधारमा, दहन बढी वा कम रहन्छ।
बायोएथानोल उपभोग गर्दा ध्यानमा राख्नु पर्ने कारकहरू मध्ये एक भनेको ज्वालाको तीव्रता र बाहिर निस्कने प्वाल हो। सामान्यतया जलाइन्छ प्रति घण्टा ०.२० र ०.६० लिटर बायोइथानोलको बीचमा। यो भन्न सकिन्छ कि यो मानक खपत हो, त्यसैले एक लिटर ईन्धन संग हामी2र5घण्टा बीचको तीव्रता मा ज्वाला हुन सक्छ।
यस जानकारीको साथ तपाईले तपाईको घरको लागि आवश्यक पर्ने बायोएथानोल स्टोभ राम्रोसँग छनोट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यस प्रकारको स्टोभले हामीलाई प्रदान गर्ने फाइदाहरूको आनन्द लिन सुरु गर्नुहोस् र चिसोमा नजानुहोस्!
1 उत्तम बायोएथानोल स्टोभको तुलना
2 सबै भन्दा राम्रो bioethanol स्टोभ
2.1 ब्रायन र ड्यानी
2.2 राफेल प्रीमियम किनमेल
2.3 बायो चिमनी प्लस सेतो
2.4 घर सेतो चयन
3 बायोएथानोल स्टोभ कसरी छनौट गर्ने
4 के बायोइथानोल स्टोभ तातो हुन्छ?
5 फाइदाहरू र बेफाइदाहरू
6 के बायोएथानोल स्टोभ सुरक्षित छ?
7 बायोएथानोल कहाँ किन्न
8 एक लिटर बायोइथानोल कति समय टिक्छ?
स्टोभ » बायोएथेनोल स्टोभ